Sergio Ramos oo dhiganaya AROOS WAYN iyo Martida oo loo diiday Taleefanada iyo Kaamirooyinka…(Sidee wax u jiraan??)+Ogoow Goorta iyo Goobta uu Aqal galka ka dhacayo – Gool FM
Sergio Ramos oo dhiganaya AROOS WAYN iyo Martida oo loo diiday Taleefanada iyo Kaamirooyinka…(Sidee wax u jiraan??)+Ogoow Goorta iyo Goobta uu Aqal galka ka dhacayo
Byare February 5, 2019
(Madrid) 05 Feb 2019. Kabtanka Real Madrid ayaa xagaagan la aqal galaya gabadha ay waqtiga dheer wada socdeen ee Pilar Rubio.
Labada lamaane ayaa wada socday tan iyo bishii September 2012 waxayna isku dhaleen saddex Caruur ah.
Waxaa u jooga Sergio, oo afar jir ah, Marcos Saddex jir iyo Alejandro oo la dhalay bishii Maarso ee la soo dahafay.
Rubio, oo ku dhalatay meel ku dhow Madrid ayaa Jariiradda reer Spain ee FHM magazine u dooratay gabadha ugu quruxda badan Adduunka sanadihii 2008 iyo 2009.
Labada lamaane ee isku dheeraaday ayaa lagu wadaa inay ku aqal galaan Magaalada Seville 15-ka bisha June ee soo socota.
Ramos kaa oo ka soo tagay kooxda Seville 2005 si uu ugu soo biiro Real Madrid kolkaa uu 19-jir ahaa ayaa ku kaftamay mar uu ka hadlayay goobta uu ka dhacayo Arooskiisa.
“Waxaan go’aansanay inaan ku Aqal galno Seville maxaa yeelay waqti dheer ayaan iminka ku noolnahay Madrid, taa oo la minco ah inay dad yar soo xaadiri doonaan.
“Wuxuu Arooskeena noqon doonaa mid gaar ah maxaa yeelay dad gaar ah ayaan nahay.
“Waqti gaar ah ayuu inoo yahay kaddib waqti dheer aan wada jirnay isla markaana aan sameynay Qoyskan Cajiibka ah oo ay joogaan saddex caruur oo yar yar kuwaa oo nolosheena ka buuxiyay Jaceyl.
“Waxaan dareenay inay iminka tahay waqtiga ku haboon Arooskeena waxaana doonnay inay Caruurteena ku raaxeystaan maxaa yeelay waa wax aysan wax badan ka fahmeyn.
32-jirka reer Spain ayaa sidoo kale daaha ka rogay inay Martida ka soo qeyb gali doonta Arooska ay waydiisan doonaan in Kaamirooyinka iyo Taleefanada ay uga soo tagaan Albaabka, si dadka Caanka ah ee ka soo qeyb galay xafladda ay waqtigooda ugu raaxeystaan iyagoon ka cabsaneyn/baqaneyn in Filim laga duubo amaba Sawirro laga qaado.
Xaflada kaddib, waxaa la filayaa in aqal galka uu ka dhoco meel gaar ah oo ku taala bannaanka Sevilla, saxaafadda Spain ayaana soo jeediyay qiyaas fikradeedka ah inuu ka dhici doono Seville Cathedral.
Pilar Rubio oo 40-jir ah ayaa iyana qishtay in Arooska laga yaabo inuu ka soo qeyb galo Heesaa Adduunka caan ka ah.
“Waxaa jiri doona wax aad u wayn laakiin idinma sheegi karo.”.
HORDHACA KULANKA WAYN EE EL CLASICO: Barcelona vs Real Madrid